सातामा २८ अर्बको शेयर खरीदविक्री : नेप्से परिसूचक ७८.८४ अंक माथि उक्लियो
मंसिर ४, काठमाडौं । यो साता धितोपत्र दोस्रो बजारमा रू. २८ अर्ब ३८ लाख ३५ हजार बराबरको ४ करोड ७९ लाख ७१ हजार १९२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
गत साता तीन ओटा कारोबार दिन मात्र खुलेको बजारमा रू. १६ अर्ब ६ करोड ८० लाख ५१ हजार बराबरको २ करोड ८६ लाख ४०९ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक उकालो लाग्न थालेसँगै कारोबार रकमले समेत उच्चता पाउँदै गएको छ ।
केही समय शेयर धितोकर्जाको सीमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर वृद्धिका कारण प्रभावित बनेको बजार पछिल्लो समय भने सकारात्मक बन्दै गएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको लाभांश र पहिलो त्रैमाससम्मको कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणको अवस्थाका कारण पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।
यो साताको कारोबारमा नेप्से परिसूचक २ हजार ६६७ दशमलव ३४ विन्दुसम्म झरेको थियो भने अधिकतम २ हजार ८२५ दशमलव ९८ विन्दुसम्म पुगेको थियो । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार २ हजार ६९० दशमलव २९ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिन २ हजार ७६९ दशमलव १३ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
गत साताभन्दा यो साता नेप्से परिसूचक ७८ दशमलव ८४ अंक माथि उक्लिएको हो । बजारले गति लिदै जादा विश्लेषकहरुले थप गति लिने विश्लेषण पनि गरेका छन् । शेयर बजारका विश्लेषक विष्ण्णु प्रसाद बस्यालले बजारको अवको गति ५ हजार ८०० विन्दु रहेको विश्लेषण गरेका हुन् ।
उनले फेसबुक मार्फत् आफ्नो विश्लेषण सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ भित्र बजारले उक्त विन्दु कायम गर्ने बताएका हुन् । उनले अबको केहि समयमै बजार ३ हजार ५० को विन्दुमा पुग्ने अनुमान समेत गरेका छन् ।
समग्र धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचकसँगै यो साता ठुला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि बढेको छ । गत साता ५०२ दशमलव २० विन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स यो साता ५२२ दशमलव ०१ विन्दुमा पुगेको छ । कुल बजार पूँजीकरण पनि गत साताभन्दा यो साता रू. १ खर्र्ब १२ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
गत साता रू. ३७ खर्ब ८३ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रहेको कुल बजारपूँजीकरण यो साता रू. ३९ खर्ब ४० अर्ब २ करोडभन्दा बढी कायम भएको हो । कुल बजार पूँजीकरणमा सर्वाधिक हिस्सा यो साता नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलेनै ओगटेको छ । यस अघि केहि समय कुल बजार पूँजीकरणमा सर्वाधिक हिस्सा नबिल बैंकले ओगटेको थियो ।
यो साता नबिल बैंकलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले कुल बजारपूँजीकरणमा पछि पारेको हो । साताको अन्तिम कारोबार दिन नबिल बैंकको कुल बजार पूँजीकरण रू. २ खर्ब १४ अर्ब १७ करोड ३६ लाख ६० हजार रहेको छ भने नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको रू. २ अर्ब १५ करोड ७० लाख रहेको छ ।
धितोपत्र दोस्रो बजारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको १५ करोड कित्ता र नबिल बैंकको १३ करोड ८४ लाख ४४ हजार ५१२ कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको छ ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४३८ र नबिल बैंकको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ५४७ कायम भएको छ ।
यो साताको बजारका सूचकहरुको अवस्था :